खुसी – Page2– Health Post Nepal
महिनावारीका वेला अत्यधिक रगत बग्ने, कहिले ढिलो त कहिले चाँडो महिनावारी हुने, अत्यधिक पीडा हुने भएमा त्यस्ता महिला तथा किशोरीले गुप्तांगको सरसफाइ गर्नुका साथै प्रशस्त मात्रामा फलफूल, ताजा सागसब्जी, गेडागुडी, क्याल्सियमयुक्त र पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण खाना खानुपर्छ । रक्सी,...
वार्षिक ६५ करोड खर्च, तर मुस्किलले ४३% ले प्रयोग गर्छन् परिवारनियोजनका साधन
स्वाभाविक प्रसूतिका लागि गर्भवती अवस्थामा योग तथा व्यायाम, कसरी गर्ने ?
हाइपोमेनिया यस्तो रोग हो, जसमा मानिसको मन अस्थिर रहन्छ । यस्ता मानिसलाई बढी बोलिरहनुपर्ने हुन्छ । आफ्ना कुरामा जिद्दी गर्ने, भनेको नमान्ने, अपशब्द बोल्ने, सानो कुरामा पनि बढी रिसाउने, मन सधैँ चञ्चल रहने लक्षण देखापर्छ । यो रोग लागेको...
शुक्रबारदेखि सौराहामा ‘मेडिकल लिटरेचर मेला’, ‘चिकित्साको सेतो र साहित्यको निलो रङ जोडेर हरियो संवाद’
एमबिबिएस अध्ययनरत साहित्यप्रेमी विद्यार्थीको पहलमा यस वर्षको दुईदिने मेडिकल लिटरेचर मेला चितवनको सौराहामा शुक्रबार सुरु हुँदै छ । सौराहाको थारू कल्चर हाउसमा शनिबारसम्म मेला चल्नेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा एमबिबिएस अध्ययनरत साहित्यपे्रमी विद्यार्थीको पहलमा मेडिकल लिटरेचर...
योगदर्शनमा मोटोपन घटाउने अनेक आसन र विधिको वर्णन पाइन्छ, जुन प्रयोगद्वारा सिद्ध छन् । हाम्रो प्राचीनतम विज्ञानले सिद्ध गरेका यस्ता विधिको प्रयोग र अभ्यासले विनाकुनै साइडइफेक्ट शरीरको वजनलाई सन्तुलनमा राख्न र अधिक वजनलाई आवश्यकस्तरमा ल्याउन सकिन्छ । यहाँ मोटोपन...
खुसी देशको सूचीमा नेपाल सय नम्बरमा, विश्वकै खुसी मुलुक फिनल्यान्ड
सरकारले सुखी नेपाल सम्बृद्ध नेपालको नारासहित विकासलाई गतिदिने बतारहँदा नेपाल नागरिको खुसीको मापनमा भने निकै पछाडि परेको छ । विश्व खुसी दिवसको अबसर पारेर राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको १५६ देशको अवस्था समेटिएको प्रतिवेदनमा नेपाल १०० नम्बरमा छ । नागरिकको औसत...
गन्तव्य बुढासुब्बा-धागो बाँध्दै रमाउँदै
युवाहरूमाझ प्रेमसम्बन्ध प्रगाढ हुने भनाइले धरानको बुढासुब्बा मन्दिर चर्चित छ । देशका विभिन्न ठाउँबाट प्रेमी–प्रेमिका आफ्नो नाम बाँसमा कुँद्न र बाँसको फेदमा ध्वजा बाँधेर मनोकांक्षा पूरा गर्न बुढासुब्बा आउने गर्छन् । तर, अहिले भने बाँसमा नाम लेख्न प्रतिबन्ध गरिएको...
बिदाको प्रयोग बोझका लागि होइन, स्वस्थ मोजका लागि
सप्ताहान्तको होस् या चाडपर्वको, बिदालाई उल्लासमय बनाउनुपर्छ, यो एक रोमाञ्चक क्षण पनि हो । तर, कहिलेकाहीँ त्यसो भइदिँदैन । हामी हप्ताभरिको कामको चापले थुप्रिएका सबै काम बिदाका लागि साँच्छौँ । यसले बिदालाई झनै बोझिलो बनाइदिन्छ । नियमित कामको चापबाट...
चिकित्सा पेसा यसै पनि सधैँ व्यस्त हुनुपर्छ । रातसाँझ, घरपरिवार, चाडपर्व, जेसुकै होस्, चिकित्सक सधैँ बिरामीकै टहलमै व्यस्त हुन्छ । त्यसमा पनि दम्पती नै यही पेसामा हुँदा अझै निजी जीवन साँघुरिने नै भयो । पछिल्लो पुस्ताका चर्चित स्त्री तथा...
संस्कृतको ‘युज्’ धातुबाट बनेको ‘योग’ शब्दको अर्थ हुन्छ– जोड्नु । आत्माको परमात्मासँगको मेल नै योग हो । महर्षि पतञ्जलिको योगदर्शनमा योगलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ– योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । अर्थात्, चित्त(मन)का वृत्तिको निरोध नै योग हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको पूर्ण...
पुनहिल पुग्दा मनै हलुंगो (फोटो फिचर)
विदेशी र नेपालीकै लागि पनि भ्रमणको अपार आनन्द लिन उपयुक्त स्थल हो, म्याग्दीको घोरेपानी र पुनहिल । भ्रमणका लागि मात्र नभई यो आत्मिक ज्ञान र मनलाई हलुका बनाउन पनि यी स्थान उपयुक्त छनोट बन्न सक्छन् । मन हलुंगो हुँदा...
सुपर–हेल्दी हुन चाहनुहुन्छ ?
१. ब्रेकफास्ट नछुटाउनुहोस् ब्रेकफास्ट बहुउपयोगी छ । यसले मेटाबोलिजम राम्रो बनाउनुका साथै अधिक भोकबाट पनि जोगाउँछ । अध्ययनले पुष्टि गरेको कुरा हो, ब्रेकफास्ट खाने युवाले दिनभर काममा राम्रो प्रदर्शन गर्छन् र ब्रेकफास्ट गर्ने बच्चाको खानामा रुचि बढ्छ । यदि...
कब्जियतमा फाइदा पु-याउने प्रमुख आसनहरू : धनुरासन, भुजङ्गासन, पवनमुक्तासन, नौकासन, बालासन, उष्ट्रासन, शशकासन, नाभ्यासन आदि । चन्द्रासन र त्रिकोणासन पनि उत्तिकै लाभदायक छन् । यीमध्ये केही आसनबारे ग्यास्ट्रिक रोगको उपचारमा जानकारी दिइएको छ । बाँकी आसनहरूको अभ्यास विधिबारे जानौँ...
राम्रो मान्छे बन्ने १५ तरिका
दैनिक जीवनमा हामी राम्रो मान्छे बन्न निकै प्रयात्न गरिरहेका हुन्छौ । तर पनि हामी आफ्नै र अरुको नजरमा पनि राम्रो देखिने सामान्य कुराहरुमै ध्यान पु¥याइरहेका हुँदैनौ । दैनीक जीवनमा यस्ता सामान्य कुरा जसमा ध्यान दिनाले हामी राम्रो मान्छे बन्न...
खानका लागि बाँच्ने कि बाँच्नका लागि खाने ?
गोरखपुरबाट दिल्ली हुँदै पहिलोपटक पटियाला पुग्दा बिहानको ३ बजिसकेको थियो । तर, रात जति नै छिप्पिसकेको भए तापनि हामीलाई भने पूरा निस्फिक्री थियो । पहिलो त पन्जाबका व्यस्त रात्रिकालीन सडकहरू र त्यहाँ चौबिसै घण्टा चल्ने सार्वजनिक यातायात छँदै थिए...
गोसाइँकुण्ड निकै सुन्दर लाग्छ मलाई । ४ हजार ३ सय मिटर उचाइमा रहेको यो ठाउँ प्राकृतिक रूपले परिपूर्ण लाग्छ । गोसाइँकुण्ड, भैरवकुण्ड, सूर्यकुण्ड, दूधकुण्ड, सरस्वतीकुण्डलगायत सुन्दर १७ कुण्डहरू नजिक–नजिक टाँसिएरै बसेका छन् । सत्ययुगमा समुद्र मथेर निस्केको विषले संसार...
तिजलाई धेरैले नाच्ने-गाउने पर्वका रुपमा लिन्छन् । परम्परादेखि नै विशेषगरी नारीले वर्षभरिका पीडा र खुसीलाई गीतमा तुनेर धकफुकाएर नाच्ने प्रचलन छ । नाच्नु परम्पराका हिसाबले मात्रै होइन, स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । मानिसहरू अरू नाचेको हेर्न मनपराउँछन्...
हाँसोले घटाउँछ तनाव
तनावको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संसारमा गम्भीरखालका रोगीको संख्या थपिँदै गएको छ । तनावलाई नियमित प्रक्रिया सम्झेर मानिसहरू ‘तनाव छ’ भनेर पन्छिन खोज्छन् । तर, तनावका कारण नै अल्सरदेखि क्यान्सरजस्ता असाध्य रोगसम्म निम्तिनेतर्फ ध्यान पुगेको देखिँदैन । पछिल्लो समय...
जहाँ पुग्दा मनै प्रफुल्लित हुन्छ
काठमाडौंबाट १३३ किलोमिटर सडकयात्रापछि ५ घण्टामा चरिकोट पुगिन्छ । चरिकोटबाट १७ किलोमिटर कच्ची सडक उकालो चढेपछि कुरी पुगिन्छ । कुरी धेरैले वास बस्ने ठाउँ हो । यहाँ धेरै होटेल खुलिसकेका छन् । मोटरसाइकल वा गाडी रिजर्भ गरेर पनि यहाँ...
ग्यास्ट्रिक तथा पेटका रोगीले योगाभ्यास गर्दा बिस्तारै गर्नुपर्छ । योगाभ्यासलाई नियमित बनाउनुपर्छ । योगाभ्यास खालीपेटमा गर्नुपर्छ, स्वच्छ हावा बहने हरियो चौरमा गर्नुपर्छ, यस्तो सम्भव नभए घर–आँगनमा पनि गर्न सकिन्छ । यो अभ्यास ६–१० पटकसम्म दोहो¥याउनुपर्छ । ग्यास्ट्रिकका रोगीले निम्न...
पहिले प्रायः गाउँघरमा भेटिने घरपालुवा जनावर अहिले सहरका घरहरूमा अभिन्न सदस्यका रूपमा देखिने गरेका छन् । घरको सुरक्षार्थ खटिने कुकुर होस् वा एक्युरियममा पालिएका विभिन्न रङ र प्रजातिका माछा हुन्, व्यस्त सहरिया जीवनमा मानिसका सुख–दुःखका अभिन्न मित्र बन्दै आएका...
विराटनगर रंगेलीका जगदीशप्रसाद अग्रवाल भारतको जयपुरमा चिकित्सा शिक्षा पढ्दै थिए । पढाइ सकिनासाथ विवाह गर्ने सोच थियो उनको र परिवारको पनि । जगदीशलाई डाक्टर नै खोज्नुपर्छ भन्ने थियो, तर जात, धर्म सबै मिल्ने डाक्टर पाउन त्यति सजिलो कहाँ थियो...
२३ उपाय, जसले जीवनभर खुसी राख्छ
मानिसले मलाई प्रायः सोध्छन्, जीवनमा कसरी खुसी हुने ? खुसी हुने उपायहरू के–के छन् ? मलाई खुसी हुने उपाय बताइदिनुस् भन्नेहरूलाई म भन्ने गर्छु– जीवनमा ठूलो कुराले मात्र खुसी पाइँदैन । केही क्षणको सम्झनाले मात्र पनि खुसी दिँदैन ।...
घर पुग्नेबित्तिकै न्यानो अनुभूति किन हुन्छ भन्नेबारे कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? अथवा हाँस्दा राम्रो अनुभूति हुन्छ ? या शारीरिक अभ्यासले किन मानिसको भावनालाई राम्रो बनाउँछ ? वास्तवमा मानिसमा खुशी कहाँबाट आउँछ, शरीरका कुन अंगले यसमा भूमिका खेल्छन् ? यी...
पोखरा मणिपाल कलेजबाट भर्खरै एमबिबिएस पूरा गरेर डा. विनीता जोशी वीर अस्पतालमा जनरल मेडिकन विभागमा इन्टर्नसिप गर्दैै थिइन् । डा. रोविन जोशी सर्जरी विभागमा काम गर्थे । पढाइ सकेका छोराछोरीको उपयुक्त वरवधू खोजेर विवाह नगरिदिँदासम्मको परिवारको हुटहुटी भोग्नेलाई मात्रै...